Khalad ka muuqda qoraal kasoo baxay Madaxtooyada & arrin lagu arkay khudbadda MW Farmaajo oo hadalhayn dhalisay | Hadalsame Media
Home Maqaallada Khalad ka muuqda qoraal kasoo baxay Madaxtooyada & arrin lagu arkay khudbadda...
Khalad ka muuqda qoraal kasoo baxay Madaxtooyada & arrin lagu arkay khudbadda MW Farmaajo oo hadalhayn dhalisay
(Muqdisho) 10 Jan 2022 – Madaxweynaha DF Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa jeediyey khudbad ku aaddan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka.
Qoraal koobaya nuxurka khudbadda ayaa Madaxda Maamul-goboleedyada dalka ku adkeeyey hirgelinta jadwalka doorasho ee ay isla qaateen, iyadoo afka laga ilaaliyey Madaxa Xukuumadda oo shir guddoominayey heshiiska, iyadoo ay ka dhigan tahay inuu Madaxwaynuhu maamullada u dhiibey awooddii DF oo ay iyada tahay inay garwadeen ka noqoto doorashada, haddii kale waxay noqonaysaa doorasho heer gobol ah, iyadoo awalba ay gobolladu ku yeesheen awood aysan dastuuriyan xaq ugu lahayn.
“Dadaalladeenna iyo qorsheyaasha hirgalay ee dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida waxay horseedeen in maanta Ciidankeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga guud ee Dalka, uuna gabo-gabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen Ciidamada AMISOM amniga guud ee Dalka,” ayuu yiri isagoo ka hadlaya ammaanka waloow aysan dhowayn taasi.
“Siyaasaddeenna Arrimaha Dibadda ee ku dhisan gobannimada waxa ay horseedday in aan si mug leh uga dhex-muuqanno fagaareyaasha Caalamka, sida xubinnimada Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay oo aan ku guuleysannay markii labaad, in aan Madaxweyne Ku-Xigeen ka noqonnay Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, haatanna u sharraxannahay Goleyaasha Amaanka ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.” ayuu raaciyey.
Yeelkeede, dadwaynaha ayaa baraha bulshada durba ku faaqidaya guud ahaan nuxurka khudbadda Madaxwaynaha oo uu qofba dhan la aadey, balse waxaa jirta hal arrin oo loo hadalayo.
Waana in meesha ka dambeeysa goobtii uu taagnaa Madaxwaynaha aanu ka muuqanin sawirka MW ugu horreeyey Somalia ee Aadan Cabdulle Cusmaan (AUN), iyadoo uu mar walba surraan jirey gadaashiisa marka uu khudbaynayo iyo marka uu waraaqaha ka guddoomayo Danjirayaasha qalaad.
RW Rooble ayaa isna beri dhowayd Xafiiska Xukuumadda ka fujiyey sawirka Madaxwaynaha taasoo lagu tilmaamay xafiiltan dugsi hoose ah.
Previous articleUmmad Soomaali oo kale ah nin xoog wax uga doonay xal maka keeni karaa?!!
Next articleHal tayo oo asaasi u ah ummad kasta oo kusii yaraanaysa Soomaalida dal & dibedba (Waa maxay?)